downloads 15 461
Ụgbọ elu azụmahịa nke Bac 111. Ihe ịtụnanya dị mma. Ọnụ na azụ ụzọ na-emeghe. nhọrọ nke ọtụtụ repaints. Ngwurugwu Flight zuru oke. Uallọ ihe anya nso na eziokwu. Soundsda ụda mara mma nke "laa azu". Ndepụta Nyocha zuru ezu tupu ịmalite njem na usoro nleba anya n'ụgbọ elu. Planegbọ elu ị na-ekwesịghị idafu maka FS9! Ọ bụghị Dakọtara FSX.
The British Aircraft Corporation 1-11 (ma ọ bụ BAC 1-11) bụ a British airliner mmeghachi omume, mkpụmkpụ-nso 1960 na 1970. E site Ịchụ nta Aircraft (na), e mepụtara na-emepụta site na British Aircraft Corporation mgbe isi British emepụta e jikọrọ 'na 1960.
The BAC 1-11 e mere iji dochie Vickers Viscount. Ọ bụ nke abụọ na-adịghị osisi ugboelu, mbụ ịbụ ndị Sud Aviation Caravelle. Ruru ya ntinye n'ime ọrụ e mesịrị, ndị BAC 1-11 uru nke rụọ ọrụ nke ọma engines na ukwuu ahụmahụ na-ngwa agha. Nke a mere ka ndị na na igba egbe, ọkara nke ihe o retara na United States. The BAC 1-11 bụ a British airliners ihe ịga nke ọma, na e wee na-eje ozi ruo mgbe 1990s, mgbe ọ na-ewepụ n'ihi mkpọtụ mgbochi.
Onye edemede: David Maltby